Posted by ဘ၀အလင်းရောင် at 12:25 PM
ညို့မှိုင်းအုပ်ဆိုင်းလျက်ရှိသော သရက်တောအုပ်လေးတစ်ခုကို ထုံးဖြူဖြူအုတ်နံရံများဖြင့်ဝိုင်းရံထား
သည်။ စာကျက်စာအံသံတို့သည် သရက်တောအုပ်ကို ဖောက်ထွက်လျက် ပြန့်လွင့်နေသည်။ “သာသနရက္ခိ
ဆောက်လုပ်ဆဲနှစ်ထပ်တိုက် အဆောက်အအုံတစ်လုံး၊ရေနံချေးသုပ်ထား၍ မဲနက်နေသောသစ်သား
ကျောင်းနှစ်ဆောင်၊ကုဋီသုံးခန်းတွဲနှင့် ရေကန်ကြီးတစ်ကန်တို့မှာ သူ့နေရာနှင့်သူ ရှိနေကြသည်။
စာသင်တိုက် တည်ထောင်သည်မှာ သုံးနှစ်ပင်မပြည့်တတ်သေး။ဆောက်လုပ်ဆဲ နှစ်ထပ်တိုက်အနီး
တွင် သူလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေပါသည်။သူသည် စာသင်၏ ဦးစီး ဦးဆောင်လည်းဖြစ်သည်။
သူ့အတွက် စာပေသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ အုပ်ချုပ်မှု အတတ်ပညာသာမက ဆရာ့ဆရာတော်
ကြီးများ၏ သာသနာနှင့်ပတ်သက်သော ခံယူချက်နှင့်လုပ် ဆောင်ချက် နည်းစနစ်တို့ကို သူနေထိုင်ခဲ့သော စာသင်တိုက်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်တို့မှ အပြည့်အ၀ နီးပါး ရရှိခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် သာသနရက္ခိတစာသင်တိုက်တည်ထောင်သည့်အခါ တွေ့ကြုံရမည့်အခက်အခဲများကို နားလည်သဘောက်ပေါက်ကာ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့၏။
“ တစ်ချိန်၌ စာသင်တိုက် တည်ထောင်မည်။ ရှင်ငယ်လေးများကိုမွေးမြူကာ အခြေခံမှစ၍ စာပေပို့ချမည်”ဟု စာသင်သားဘ၀ကတည်း တည်ထောင်လာခဲ့သောစိတ်ကူးများအကောင်အထည်ပေါ်လာ
ရှင်ငယ်လေးများသည် နုနယ်သူများဖြစ်၏။ ပုံစံ သွင်းရန်လွယ်ကူသည်။ စာသင်တိုက်နှင့် သာသနာ
တော်အတွက် အားထားရသူများ ဖြစ်လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်၏။ ထို့ကြောင့် အသက် ၁၄-နှစ်၊ အရွယ်ကိုရင်
''ဦးတေဇရေ . . စာသင်တိုက်ဖွင့်ရတာ စာပို့ချရတာ တစ်ခါတလေ စိတ်ဓာတ်ကျမိတယ်'' ဟူသော ဆရာတော်တစ်ပါး၏ စကားကို သူသတိရမိသည်။
'' ဘာ့ကြောင့်လဲ ကိုယ်တော်'' ဟု သူက မေးခဲ့ပါသေးသည်။
'' အင်း . . . ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၊ တပည့်တော်မှာ ကိုရင်နှစ်ပါး ဥာဏ်ကလည်း ကောင်းတယ်၊ စာလဲကြိုးစားတယ်၊ ဒီနှစ် အကြီးတန်းလည်း ရောက်ပြီ၊ အကြီးတန်းပြီးရင် သာမဏေကျော်ဖြေခိုင်းမယ်လို့ မှန်း ထားတာ၊ အခုတော့ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်တော့ဘဲ ဖြစ်သွားရတယ်ဘုရား ''
'' ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုယ်တော်''
'' လူထွက်သွားတာ၊ အရှင်ဘုရားရေ... လူထွက်သွားတာ''ဟူ၍စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်ပြောသွားသော
ဆရာတော်၏ မျက်နှာကိုလည်း မြင်ယောင်မိပါသေးသည်။
စာချဆရာတော်တို့ စာပေပို့ချလိုစိတ် တဖြည်းဖြည်း ဆိတ်သုဉ်းလာပါက စာသင်တိုက်တို့တွင် ရဟန်း
သာမဏေ စာသင်သားများ လျော့နည်းလာပေတော့မည်။ တောရွာတစ်ချို့တွင် ဆရာတော်ကြီးများသည် ကျောထောက်နောက်ခံ တပည့်မရှိသဖြင့် စာပေမပို့ချရ။ နောက်ဆုံး တပည့်ကျောင်းသားကိုရင်လုံးပါးပါးကာ
တစ်ပါးတည်း ကျန်ရှိခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့မြင်ဖူး၏။
''ကပ္ပိယရယ်၊ ငါရယ်၊ ခွေးတစ်ကောင်ရယ်ပဲ ရှိတော့တယ်'' ဆိုသည်မျိုးပင် ဖြစ်နေတတ်သည်။
စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပြောလာသော ဆရာတော်ကိုလုပ်ငန်းသဘောနှင့် စေတနာတို့ရောထွေးမသွား
'' ကိုယ်တော်က စိတ်ပျက်တယ်လို့ပဲ ပြောတယ်။ ကိုယ်တော့်စေတနာက ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာ ချထားခဲ့တာကိုး၊ စေတနာကို သာသနာရဲ့အပေါ်မှာ မထားဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာ ပုံအောထားလိုက်တော့ စိတ်ပျက်တယ်လို့ ဖြစ်လာတာပဲပေါ့။ သာသနာအပေါ်မှာရော၊ စည်းကမ်းအပေါ်မှာရော စေတနာထားနိုင်ရင် ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ် စေတနာထားမှု တဖြည်းဖြည်း လျော့ချနိုင်လာလိမ့်မယ်။
“စေတနာကို ထားသင့်တဲ့ ဘက်မှာသာ ထားရပါမယ်။ ဒါမှ ကိုယ်တော့် လုပ်ငန်း အောင်မြင်လာမှာပေါ့။ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးလည်း ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ''
သူပြောခဲ့သော စကားများကို ဆင်ခြင်ရင်း ဆောက်လုပ်ဆဲ ကျောင်းဆောင်ဆီမှ စာအံကျောင်းဆီသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ကိုရင်သုမေဓ တစ်ပါးစာမကျက်ဘဲအိပ်ပျော်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။သူ့ကိုမြင်သည်နှင့်
အနီးရှိ ကိုရင်ဓမ္မဓဇက လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။ ထိုအခါမှ အဆောတလျင်ထကာ စာအော်ကျက်လေသည်။
သူ့စိတ်ထဲတွင်ပြုံးမိသော်လည်း မျက်တောင်မခတ်ဘဲ ခပ်တည်တည် ကြည့်နေလိုက်ရသည်။ကိုရင်နှစ်
ပါးကို ကြည့်ရင်း အတွေးတို့က အတိတ်ရပ်ဝန်းဆီသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့၏။
“ အော် . . ၀ဏ္ဏသာမိ အခုဘယ်ဆီများ ရောက်နေပါလိမ့်၊ လူကော ထွက်သွားပြီးလား..၊ ဒါမှမဟုတ်
သာသာနာတော်မှာဘဲ ရှိပြီး။ စာသင်တိုက် ဖွင့်နေတာလား..။ ရိပ်သာပဲ ဖွင့်နေတာလား . .''
ရထားစောင့်ရသည်မှာ တစ်နာရီပင် ရှိရော့မည်။ ရထားက မလာသေး။ မန္တလေးဘက်မှ အထွက်
နောက်ကျ၍ ထင်၏။ ရထားဘူတာအတွင်းမှာတော့ စည်ကားလျက်ရှိသည်။
ဦးဥာဏမှာ စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ဖတ်လျက်ရှိသည်။ ဦးဉာဏ၏အနီးတွင်ကားသူ ရထားဘူတာအတွင်း သို့ဟိုကြည့် ဒီကြည့်၊ မြင်မြင်သမျှ အထူးအဆန်းတွေချည်းအဖြစ်ထင်နေမိသည်။
ဦးဥာဏသည် ကျောင်းပိတ်ချိန်ဖြစ်၍ ဇာတိရပ်ရွာကျောင်းသို့ ခေတ္တပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။စာသင်တိုက်
သို့ ဦးဥာဏ အပြန်တွင် သူ့ကို ရွာကျောင်းဆရာတော်က ထည့်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စာသင်တိုက်ရှိ ဆရာတော်ကို လျောက်ထား ပြီးပြီဆို၏။ အပ်နှံစာတစ်စောင်လည်း ရေးပေးလိုက်သေးသည်။
''ကိုရင် မပျင်းနဲ့၊ ကောင်းကောင်းနေ၊စားကိုလည်းကြိုးစား'' ဟု အထပ်ထပ်အခါခါမှာလိုက်သည်။
'' ဥာဏ ငါ့မှာလည်း တေဇ မရှိတော့ တောက်တိုမယ်ရ ခိုင်းစရာ လက်တစ်ဖက် ပြုတ်သွားသလိုပဲ''ဟူသော ပြောသံကိုလည်း ကြားယောင်မိသေးသည်။
'' ကိုရင် . . ဟိုမှာ ရထား လာနေပြီ၊ လက်ဆွဲအိတ် ကိုင်ထား''
ဦးဥာဏပြောမှ သူ ရထားကိုကြည့်လိုက်မိသည်။ ရထားကြီးသည် ဥသြသံဆွဲလျက် ဘူတာထဲသို့ ၀င်လာသည်။ ရပ်သည့်အရှိန်ပင် အရှိန်ပင်ကောင်းကောင်း မသေသေး၊ ခရီးသည်များက ထိုင်ခုံနေရာ ရကြရန် အတင်းတိုးဝှေ့ ပြေးတက်ကြသည်။
ဦးဥာဏနှင့် သူ လည်း လူတို့နှင့်အတူရော၍ တိုးဝှေ့ကာ တက်လိုက်သည်။ရထားပေါ်ရောက်မှအသက်
ရှုချောင်သွားတော့၏။ သူတို့ ထိုင်ခုံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံတွင် ဦးပဉ္ဇင်းတစ်ပါးနှင့် ကိုရင်တစ်ပါး ထိုင်နေသည်
ငါးမိနစ်ခန့်အကြာ ရထားကြီး ပြန်လည် ထွက်ပါပြီ။
“ဂျုံးဂျုံး ဂျိမ့်ဂျိမ့်၊ ဂျုံးဂျုံး ဂျိမ့်ဂျိမ့်”နှင့် လှုပ်ခါယမ်းနေသည်။ ဤအသံကိုပင်“တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့၊တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့၊
စာသင်တိုက်ကို သွားမယ်ဟေ့ ”ဟူ၍ သူ့စိတ်ထဲ ကြားနေမိသည်။
မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် ထိုင်နေသော ဦးဇင်းတစ်ပါးက ဦးဥာဏကို မေးသည်။
''တပည့်တော်တို့ ပဲခူးမြို့က . စာသင်တိုက်ကို သွားမလို့ပါဘုရား”
''တပည့်တော်တို့လဲ အဲဒီစာသင်တိုက်ကို သွားမလို့ပါပဲ၊ တပည့်တော်တို့အတွက်အဖော်ရတာပေါ့''
''ဒါနဲ့. . ကိုရင်ဘွဲ့က ဘယ်လို ခေါ်သလဲ''
'' ရှင်ဝဏ္ဏသာမိပါ ဘုရား''
'' အင်း . . ကိုရင်ရဲ့ ဘွဲ့က ဥပဓိရုပ်နဲ့ဆိုရင် လိုက်ဖက်သားပဲ။ ဒီကကိုရင်ကတေဇလို့ခေါ်တယ်”ဟု
ဆိုကာ ဦးဥာဏသည် သူကို ညွှန်ပြ၍ မိတ်ဆက်ပေးသည်။
အဖော်ရပြီဆိုကာ ပိုမို ၀မ်းသာသွားမိ၏။
ရထားကြီးသည်ကား ဘူတာငယ်လေးများကို ဖြတ်သန်းလျက် တဂျိမ့်ဂျိမ့် သွားနေပါသည်။
သူ စာသင်တိုက်သို့ ရောက်ခဲ့ပြီ၊ ကိုရင်ဝဏ္ဏသာမိနှင့်အတူနေရာကပ်လျက်သား နေရ၏။ သူနှင့် ကိုရင်ဝဏ္ဏသာမိ အသက်ချင်းလည်း တူသည်။ အရပ်ချင်းလည်း ညီမျှသည်။ သို့ရာတွင်ကိုရင်ဝဏ္ဏသာမိက အသားအနည်းငယ်ဖြူသည်။
တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး ညီအစ်ကိုအရင်းတမျှ ခင်မင်စွာနေကြသည်။ ဆွမ်းခံအိမ် ဖိတ်တော့ လည်း အတူတူ၊ ဆွမ်းခံကြွတော့လည်း အတူတူ၊ စာဝါသွားတော့လည်း တစ်ပါးကိုတစ်ပါး စောင့်ကာ သွားသည်။
နံနက်ပိုင်းအရုဏ်ဆွမ်းခံစီတန်းလျှင် သူတို့နှစ်ပါးဦးစွာရောက်နေတတ်သည်။ ဘုရားဝတ်တက်သွား
လျှင်လည်း နောက်မကျတတ်၊ စာကျက်၊ စာပြန်၊ စာအံလည်း တစ်တွဲတွဲ။
အမြဲတွဲနေတတ်သော သူတို့နှစ်ပါး၏ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုမြင်သော အခြားစာသင်သးများက-
'ဒွန္ဒာ ဒွန္ဒာ ငှက်ဖြစ်ရင်လည်း အတူတူ၊ လူဖြစ်ရင်လည်း မကွာမကွဲ၊ ဆွမ်းခံတော့လည်း တစ်အိမ်းတည်း၊ ငပိဖြစ်တော့လည်း တစ်အိုးတည်း' ဟူ၍ စကြ နောက်ကြသည်။သူတို့နှစ်ပါးမှာ အပြုံးမပျက်။
“၀က်သားဖြစ်တော့လဲ အာလူးနဲ့ ၀က်သားပေါ့ ”ဟု ပြန်လည်၍ ပြောတတ်ပါသေးသည်။
ဤသို့ဖြင့် သူနှင့် ရှင်ဝဏ္ဏသာမိတို့ ပထမကြီးတန်းသို့ပင် ရောက်ခဲ့ကြပြီ။ ပထမကြီးတန်း ရောက်နေချိန် တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး အနေအထိုင်စရိုက်တော့ အနည်းငယ်ကွဲလာ၏။
ရှင်ဝဏ္ဏသာမိ ဆွမ်းခံအိမ်ရောက်လျှင် စကားဖောင်ဖွဲ့ကာ ပြောဆိုတတ်လာ၏။ ထိုသို့ပြောဆိုနေလျှင် ဆွမ်းခံအိမ်စေ့ငှအောင် မသွားနိုင်မှာကို သူက စိုးရိမ်၏။ ထို့ကြောင့် ဆွမ်းလောင်းသည့် ဒကာမကြီး မရိပ်မိ
အောင် မသိမသာ လက်ကုတ်၍ အချက်ပေးရသည်။
ရှင်ဝဏ္ဏသာမိ၏ နေရာ၌လည်း ဗေဒင်စာအုပ်တွေ၊ ကဗျာစာရွက်တွေလည်းတွေ့ရတတ်သည်။ စာအံ
ကျောင်း ဆင်းပြီး နေရာရောက်ပြီးဆိုလျှင် ဗေဒင်စာအုပ်ကို ကိုင်နေတတ်သည်။ စာရွက်ပေါ်တွင် ဟိုခြစ် သည်ခြစ်လုပ်နေတတ်သည်။
'' ၀ဏ္ဏ . . ဒီနှစ် အကြီးတန်း စာများတယ်နော်''
'' အေးပါ . . . သိပါတယ်၊ ဒီမှာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ့နေလို့''
'' ဘာစိတ်ဝင်စားစရာ တွေ့လို့လဲ၊''
'' တပည့်တော်နဲ့ အရှင်ဘုရား ခင်မင်နေတာဟာ ဗေဒင်အလိုရဆိုရင် မိတ်ဘက်ကွ တေဇရ''
'' ၀ဏ္ဏရာ မိတ်ဆွေသီတင်းသုံးဖော်တွေဆိုနေမှ တစ်ကျောင်းလုံးမိတ်ဖက်တွေချည်းပေါ့ မဟုတ်
'' ဒီမှာလေ ဦးသာ, စိန်ပန်း၊ ဒန်းလှ, ကိုရှာ မိတ်ဖက်သာ တဲ့ ''
အရှင်ဘုရားကတေဇဆိုတော့ စနေ၊ တေဇဆိုတော့ စနေ၊ တပည့်တော်က ၀ဏ္ဏသာမိဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး မိတ်ဖကမို့လို့ တပည့်တော်တို့က အထူးပြောစရာမရှိအောင်ခင်မင်ရင်းနှီးနေတာပေါ့”
''ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး ၀ဏ္ဏရာ အရှင်ဘုရား စကားတစ်ခု ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား၊ ၀ိဿာသော ပရာမာ ဥာတိ - ခင်ရာဆွေမျိုး မြိန်ရာဟင်းကောင်း ဆိုတာလေ''
သူနှင့် ရှင်ဝဏ္ဏသာမိတို့ ဤကဲ့သို့ ကွဲလွဲမှုကလေးတွေ ရှိသော်လည်း ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကမပျက်ပါ။
ရှင်ဝဏ္ဏသာမိသည် ရွာကိုပြန်ရတော့မယ်တဲ့၊ ဆရာသမားကျန်းမာရေးအတွက်ကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ ဘယ်လောက်ကြာမည်ဆိုတာလည်း သူမသိတဲ့။ အိပ်ရာဖျာလိပ်တွေ သိမ်းရင်း၊ စာအုပ်တွေသိမ်းရင်း သူ့ကို နုတ်ဆက်ပါသည်။ သူ ရှင်ဝဏ္ဏသာမိကို ကျောင်းမုခ်ဝအထိ လိုက်ပိုခဲ့ပါသည်။
သူကျောင်းဆောင်ပေါ်သို့ ပြန်ရောက်တော့ ရှင်ဝဏ္ဏသာမိနေရာကိုတွေမြင်ရသည့်အခါ ၀မ်းနည်းသလို
သူ ပထမကြီးတန်းကိုဖြေဆိုပြီး အချိန် ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်၏ ဆက်သွယ်ပေးမှုကြောင့် မြို့ပေါ်စာသင်တိုက်မှာပင် ရဟန်းခံသည်။ ပထမကြီးတန်းလည်းအောင်ပါသည်။
သီတင်းကျွတ်စာဝါပိတ်ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ၌ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုသည်။ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ သာသနာ့တက္ကသိုလ်၌ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး “သာသနတက္ကသီလ ဓမ္မာစရိယ B.A(Buddhism)” ဘွဲကိုလည်းရရှိခဲ့ပါသည်။
''ဆရာတော်ဘုရား စာပြန်မလို့ပါဘုရား၊ ဆရာတော်ဘုရား စာပြန်မလို့ပါဘုရား ''
“ ဟေ...အေး အေး“
စာပြန်ရန်ရောက်လာသော ကိုရင်တစ်ပါး၏အသံကြောင့် သူ၏ အတွေးစများ ပြတ်သွားသည်။
စိတ်အာရုံရှိ ပုံရိပ်တို့သည်လည်း ပျောက်ကွယ်သွား၏။ စာပြန်မည့်ကိုရင်၏စာအုပ်သည် သူ၏မျက်နှာရှေ့သို့
သူနေထိုင်သည့် မြို့နှင့် မိုင် ၆၀-ခန့် ဝေးသော မြို့တစ်မြို့ရှိကျောင်းရေစက်ချပွဲတစ်ခု၏ အချိုပွဲဝိုင်း
'' ဦးတေဇလို့ ထင်ပါတယ်''
အနားကပ်ကာ ဘွဲ့ကို တိုးတိုးမေးသော အသံကြောင့် သူလှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ၀၀ ဖိုင့်ဖိုင့် အသားကဖြူဖြူ ဥပဓိရုပ်က ကောင်းကောင်း ဆရာတော်တစ်ပါး..။ စိတ်ထဲမှာ မြင်ဖူးသလိုလို ..။
'' အရှင်ဘုရား ၀ဏ္ဏသာမိ မဟုတ်လား၊''
'' အရှင်ဘုရား မှတ်မိသားဘဲ ''
'' မမျှော်လင့်ဘဲ အခုမှ တွေ့လိုက်ရတော့ တပည့်တော် စိတ်ထဲတော်တော် ဝေခွဲယူရတယ်၊အခုဘယ်
မှာ ကျောင်းထိုင်နေတာလဲ၊ ဘာလုပ်နေတာလဲ၊ ရိပ်သာ ဖွင့်နေတာလား''
'' အရှင်ဘုရား မေးခွန်းတွေက များလှချေလား၊ တပည့်တော် ဘယ်ကစပြီး ဖြေရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး၊အလှူ ပြီးရင် တပည့်တော်ကျောင်းကိုကြွခဲ့ပါအုံး၊ကျောင်းရောက်မှပြောကြတာပေါ့၊ရော့လိပ်စာ
ရသည်။ ဖုန်းနံပါတ်လည်း ပါသေးသည်။
'' အရှင်ဘုရားကော ဘာလုပ်နေသလဲ''ဟု ဦးဝဏ္ဏသာမိက မေးသည်။
'' တပည့်တော် အကြီးတန်းအောင်ပြီးတာနဲ့ သာသနာ့က္ကသိုလ် တက်တယ်၊ တက္ကသိုလ်တက်တာ လေးနှစ် အတွင်းမှာပဲ ကျမ်းလဲပြီးသွားတယ်၊ နောက် တောင်တန်းသာသနာပြု ၂-နှစ်ကြွ၊ တက္ကသိုလ်ကပေး
တဲ့ ဘွဲ့ကိုယူ၊ စာသင်တိုက်မှာ စာပြန်ချ၊ အခုတော့ ဆရာတော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့မြို့ငယ်လေးမှာစာသင်တိုက်ဖွင့်
လို့ပေါ့၊ သံဃာကတော့ အပါး လေးဆယ်ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်''
တယ် ဦးတေဇ။ ကဲ အလှူ ပြီးမှ ကျောင်းမှာ ပြန်ဆုံမယ်''
အောင်သိဒ္ဓိကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ဝင်လိုက်သည်နှင့် စုလစ်မွန်းချွန်များဖြင့် မြန်မာမှု မြန်မာ့ဟန်
အတိုင်းဆောက်ထားသော နှစ်ထပ်ကျောင်းတော်ကြီးကိုမြင်ရသည်။ ကျောင်းရှေ့တွင် ကားသုံးစီး ရပ်ထား
သည်။ ဆော့ကစားနေသော ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီးမေး ကြည့်တော့ ဧည့်သည်တွေရောက်နေ
“ ဧည့်သည်တွေ ရောက်လဲရောက်ပေါ့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ဆီလာတာပဲ ” ဟု တွေးကာ ကျောင်းပေါ်သို့ တက်သွားသည်။ ကျောင်းတံခါးပေါက်အနားအရောက် အထဲမှပြောဆိုနေသော စကားသံကြောင့်သူ့ခြေလှမ်း
တစ်လုံးကို အိတ်နဲ့ထုတ်ပြီး 'အောင်' ပါတဲ့ တနင်္ဂနွေသားကို အိမ်အောက်ဝင်ပြီး မြှုပ်ခိုင်း၊ မြှုပ်တဲ့အခါလည်း တကာမကြီးက သိန်း နှစ်ရာနဲ့ရောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ သိန်းနှစ်ရာဆိုပြီးမြေဖြူနဲ့ အုန်းသီးမှာရေး အိမ်ရောင်း မြန်မြန်ထွက်ပါစေဆိုပြီး အုန်းသီးကို အုန်းရွက်နဲ့ ၉-ချက်ရိုက်၊ ကြားလား ''
'' မှန်ပါ့ ဘုရား၊ တပည့်တော်မ သားကြီးက အောင်စိုးဆိုတော့ တနင်္ဂနွေသား ဘုရား၊ သူ့ကို ခိုင်းလို့
'' ဟာ့ .. ရတာပေါ့ မိသားစုဝင်တွေဆိုတော့ ပိုလို့တောင် ကောင်းသေးတယ်''
'' တပည့်တော်မ ဆရာတော် လိုအပ်သလို သုံးဖို့လှူပါတယ်ဘုရား''
'' အေး ..အေး ..၊ ရှေ့က ခုံပေါ်မှာ ချထားလိုက်''
'' ဒီဘက်က တကာမက''
'' တပည့်တော်မက အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ပါတယ်၊ အရောင်းအ၀ယ်လည်း မကောင်းဘူးဘုရား၊ ဘာအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်၊ အရှုံးပဲ ပေါ်နေပါတယ်ဘုရား၊ ဒါ့ကြောင့် တပည့်တော်မအတွက်လည်း ရောင်းရေး ၀ယ်ရေးအတွက် ကောင်းအောင်...”
'' ဒီက တကာမလေးက မိဘကို ပြစ်မှားထားတာကိုး၊ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုလုပ်လုပ် မကြီးပွားနိုင်ဘူး ''
'' မှန်ပါ၊ တပည်တော်မမှာ အမေတော့ မရှိတော့ဘူးဘုရား၊ အဖေတော့ ရှိပါသေးတယ်၊အဖေနောက်
အိမ် ထောင်ပြုလိုက်ကတဲက တပည့်တော်လဲ မသွားဘူးဘုရား၊ အဲဒီမိန်းမနဲ့ဆိုရင်မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့ တပည့်
တော် ခါးခါး သီးသီး ပြောဖူးတာတော့ ရှိပါတယ်ဘုရား၊''
'' တကာမလေး အဖေဟာ အဖေပါပဲ၊ ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ပါပဲ၊ အဖေကိုလည်း သွားတောင်းပန်လိုက်၊ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အဖေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖြစ်ဖြစ်၊ အ၀တ်အစားကိုဖြစ်ဖြစ် တောင်းပန်လိုက်၊ ဒီလိုဆိုရင် အောင်
်မြင်လိမ့်မယ်၊ ရော့.. ဒီအဆောင်လေးယူသွား၊ အလုပ်လုပ်တိုင်း ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထား၊ အောင်မြင်လာ
သူ သည် ကျောင်းခန်းထဲမှထွက်ပေါ်လာသော စကားသံများကိုနားထောင်နေရင်းရပ်နေသည့်အဖြစ်
ကိုပင် မေ့လျော့ နေမိသည်။ ကျောင်းခန်းထဲမှ ထွက်လာသောတကာမသုံးယောက်သူ့ အနားရောက်မှ သတိ
ပြန် ၀င်လာသည်။ တကာမများက သူ့ကို လက်အုပ်ချီသွားပါသည်။
သူ ကျောင်းထဲသို့ ၀င်လိုက်သည်။ ပြောင်လက်ချောမွတ်နေသောကြမ်းပြင်သည်သူ့အရိပ်ကိုပင်ထင်နေ
သည်။ မျက်နှာကြက်ပေါ် ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း မီးဆိုင်းများဖြင့် တင့်တယ်လှပေသည်။ ကျောင်းနံရံ ဘက်တွင်လည်း ရေခဲသေတ္တာနှင့် ရေအပူအအေးရနိုင်သောရေသန့်စက်လည်းရှိသည်။နံရံပေါ်တွင်ရေတံခွန်
ဘုရားခန်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်မိသည်။ ပလ္လင်ပေါ်တွင် စံမြန်းသီတင်းသုံးနေသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်စား ရုပ်ပွားတော်ကြီးမှာ နောက်ခံမီးဆိုင်းတို့ကြောင့် ရောင်ခြည်တော်များ ကွန့်မြူးလျက် တင့်တယ်နေပေသည်။ ပလ္လင်တော်ရှေ့တွင်ကားအမွေးတိုင်မီးခိုးတလူလူဖြင့်ကန်တော့ပွဲခုနစ်ပွဲတွေ့ရသည်။ဖယောင်းတိုင်မီးတွေက
သူ ဘုရားရှင်အား ဦးချ ကန်တော့လိုက်သည်။
'' ဦးတေဇ ရောက်တာ ကြာပြီလား''
'' သိပ်တော့ မကြာသေးဘူးဘုရား၊
“ခုနကအရှင်ဘုရားဧည့်သည်တွေရောက်နေတာနဲ့တပည့်တော်လဲ မ၀င်သေးဘဲ စောင့်နေတာပါ ''
ဦးဝဏ္ဏသာမိသိဒ္ဓိ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို ခေါ်လိုက်သည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ အအေးဗူးတွေ ယူခိုင်းကာ ကပ်စေသည်။ ဦးဝဏ္ဏနှင့် ငယ်စဉ်ကအကြောင်းတွေကို စကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဦးဝဏ္ဏ၏
အတွေးအခေါ် အချို့ကိုလည်း သိခွင်ရခဲ့သည်။ စကားပြောဆိုကြသည်မှာတစ်နာရီခန့်ကြာမည်ထင်သည်။
နံရံရှိ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ သုံးနာရီထိုးပြီ။
သူ အအေးဗူးကို ဖွင့်၍သောက်လိုက် သည်။ အအေးသည် အေးမြမှု မရှိတော့၊ သူ့သဘာဝအတိုင်း ချို မြိန်သည့် အရသာတော့ ပျောက်မသွား၊ သို့ရာတွင် သူ၏ လည်ချောင်း ချောက်ကပ်ကပ် တစ်ဆို့ဆို့ဝင်သွားပါသည်။
'' ဦးဝဏ္ဏ ညနေ သုံးနာရီလဲထိုးပြီ တပည့်တော် ပြန်အုံးမယ်''
''ဟာ.. ကိုယ်တော်က ဒီမှာ ညမကျိန်းဘူးလား''
''တပည့်တော်လာတာ နေ့ချင်းပြန် ဘုရား၊ မနက်ဖြန်လည်း ကျောင်းမှာ လပတ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခိုင်း
ဖို့ရှိသေးတယ်''ဟုဆိုကာ ကျောင်းမှ ထွက်လာခဲ့သည်။ ဦးဝဏ္ဏက မုခ်ဝရောက်သည့်အထိ လိုက်ပို့သည်။ ဖုန်း
ကတ္တရာလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ကားကလေးတစ်စီး အရှိန်ဖြင့်ပြေးနေသည်။ ကားလေးပေါ်တွင်ကား ကားမောင်းသူ ဒကာနှင့် သူ..။
သူ၏စိတ်အာရုံတွင် ဦးဝဏ္ဏ၏ စကားသံများက ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။
''အရှင်ဘုရား ကြည့်စမ်းပါအုံး ခုခေတ်မှာဓမ္မာစရိယတွေအောင်ပြီးနေစရာမရှိဘူး၊ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်
ကတည်းက သူတို့စိတ်ထဲမှာ စာတစ်ခုတည်းရှိတယ်၊ ခုခေတ်က ရှေးဘုန်းရှေး ကံဆိုတာချည်း အားကိုးလို့မရ
တော့ဘူး၊ ကိုယ်မှ မမြင်ရတာ၊ ကိုယ်တိုင် လှုပ်ရှားနိုင်မှ ခေတ် နဲ့အညီ နေနိုင်တာ အရှင်ဘုရားရေ''
“သြော်... ဦးဝဏ္ဏ ဘယ်လိုအတွေးအခေါ် မျိုးဝင်နေပြီလဲ ”
သူ၏ စိတ်အာရုံထဲတွင် ဦးဝဏ္ဏနှင့် ငယ်စဉ်က စာသင်တိုက်မှာ နေစဉ်က ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပုံတွေ ထင်လာသည်။ စာသင်တိုက်သွားရန် မီးရထားပေါ်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ပုံလေးတွေ မြင်ယောင်လာ၏။ မီးရထားကြီးခုတ်မောင်းရာ သံလမ်းကိုလဲမြင်ယောင်လာသည်။
မီးရထားသံလမ်းနှစ်ဖက်သည် မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်နေပါသည်။ သံလမ်းတဖက်နှင့် တစ်ဖက်သည် ဆုံမှတ်ဟူ၍ မရှိ၊ မည်သည့်အချိန်မှလည်း ရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဦးဝဏ္ဏ၏ လုပ်ဆောင်ချက်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့် ခင်မင်နေသော်လည်း နှလုံးသားချင်းမှာတော့ မီးရထားသံလမ်းကဲ့သို့ ပေါင်းဆုံမှုမရှိသောမျဉ်းပြိုင်တွေများဖြစ်နေပြီလား..၊
သူ၏ စိတ်အာရုံထဲ မေးခွန်းတွေ တစ်သီးကြီး ပေါ်လာသည်။ သူစီးလာသော ကားကလေးကတော့ အရှိန်နှင့် ပြေးနေဆဲ... ။
0 comments em “